छालामा के को कारणले आाउने गर्दछ सेतो दुबी ? यसबाट यसरी बच्न सकिन्छ ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/छालामा के को कारणले आाउने गर्दछ सेतो दुबी ? यसबाट यसरी बच्न सकिन्छ !
काठमाडौँ / कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरको विभिन्न भागको छालामा अस्वाभाविक सेतो दाग देखिन सक्छ। दाग कालो होस् या सेतो। स्वाभाविकभन्दा फरक भएपछि जस्तोसुकै दागले पनि सुन्दरतामा असर गर्छ।